Muxuu ka yiri tababare Ole Gunnar Solskjær kulankii ay barbaraha la galeen kooxda Liverpool?? – Gool FM
Dajiye January 18, 2021
(Manchester) 18 Jan 2021. Tababaraha kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa sheegay in kooxdiisa ay u qalantay inay hesho wax ka badan hal dhibic, kulankii ay xalay barbardhaca galeen Liverpool.
Kooxaha Liverpool iyo Manchester United ayaa dhibcaha ku qeybsaday garoonka Anfield, kaddib markii ay ku kala baxeen barbardhac 0-0 ah, ciyaar qeyb ka aheyd Isbuuca 18-aad ee horyaalka Premier League.
Haddaba wargeyska “Express” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu Tababare Ole Gunnar Solskjær bixiyay kaddib ciyaarta waxaana uu yiri:
“Waxaan kaliya gaari doonnaa natiijo fiican hadii aan guuleysano kulanka soo socda.”
“Waa fursad luntay marka la eego fursadihii aan haysanay, laakiin waxaan la ciyaarnay koox aad u wanaagsan.”
“Waan ka xumahay, laakiin dhibicdu wali way fiicantahay haddii aan guuleysano kulanka soo socda.”
Tababaraha Man United ayaa intaa ku daray kaddib markii uu tilmaamay in qeybtii hore aysan fiicneyn kooxdiisa, isagoo yiri:
“Waxaan aheyn kuwa xoogan dhamaadka ciyaarta.”
“Waxaan sameynay horumar natiijada ma ahan waxa kaliya ee aan ka niyadjabnay laakiin sidoo kale waxqabadka, waan ogahay in dhalinyaradaan ay si fiican u ciyaari karaan.”
Si kastaba ha noqotee, Manchester United ayaa sii xajisatay miiska kala sarreynta horyaalka Premier League iyadoo leh 37 dhibcood, waxaana ku soo xigta Manchester City oo leh 35 dhibcood, Leicester City oo iyadana leh 35 dhibcood ayaa fadhisa booska saddexaad, halka Liverpool ay u dhacday booska afaraad iyadoo leh 34 dhibcood.